सुविन भट्टराई Info. About. What's This?
ⓘ सुविन भट्टराई
सुविन भट्टराई एक नेपाली उपन्यासकार तथा आख्यानकार हुन्। कथाकी पात्र कथा सङ्ग्रह लेखेर लेखन क्षेत्रमा उदाएका सुविन भट्टराई युवापुस्तामा निकै चर्चित बनिसकेका छन्। उनले हालसम्म समर लभ, साया र मनसुन लगायतका उपन्यासहरू लेखिसकेका छन्। उनको चर्चित उपन्यास समर लभ उनले लेखेका दोस्रो कृति हो भने पहिलो उपन्यास हो। उनको प्रथम कृति कथाकी पात्र एक लघु कथाको सङ्गालो हो। उनको चर्चित उपन्यास समर लभ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पर्यावरण विज्ञानको केन्द्रीय विभागमा पढ्ने दुई विद्यार्थी बीच परेको प्रेम सम्बन्धमा केन्द्रीत छ। यो पुस्तक वि.सं २०६९ मा नेपालमा सर्वाधिक बिक्रि भएको पुस्तकहरू मध्ये एक हो। यस पुस्तकको ४०,००० भन्दा बढी प्रतिलिपी बिक्री भइसकेको छ। यसको भाग दुई साया वि.सं २०७१ मा प्रकाशित गरिएको थियो जसमा कसरी उनीहरूको बीच पुनर्मिलन हुन्छ र कसरी उनीहरूले आफ्ना परिवारलाई चित्त बुझाउँछन् भन्ने विषयमा केन्द्रीत छ। यो उनको दोस्रो उपन्यास प्रकाशन गरिएको महिनामै पुन:प्रकाशन गरिएको थियो। यो पुस्तकलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अभिनेत्री गरिमा पन्त, केकी अधिकारी र स्वयम् लेखकले सार्वजनिक गरेका थिए।
सुविन भट्टराई नेपालको पूर्वी जिल्ला खोटाङमा जन्मिएका थिए। उनको परिवार पछि बसाइसराइ गरी काठमाण्डौ आएका थिए। उनका पिता सरकारी कर्मचारी हुन् भने आमा घर गृहिणी हुन्। उनले २०६२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पर्यावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका थिए। उनमा बाल्यकाल देखिनै विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, ध्रुवचन्द्र गौतम, मार्क ट्वेन, चार्ल्स डिकेन्स, आन्तोन चेखब, पारिजात आदिबाट प्रभावित भएका थिए।
2. लेखन क्षेत्रमा
भट्टराईले १० वर्षको उमेर विद्यालयबाट लेखन क्षेत्रमा कदम राखेका थिए। उनले कविता लेख्न सुरु गर्दै थुप्रै कविततहरू रेडियो नेपाल मार्फत प्रसारण गरेका थिए। उनले रेडियो नेपालबाट प्रशारित विभिन्न नाटकहरूमा बालक कलाकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र रेडियो नेपालको कार्यक्रम हातेमालोको उप-सञ्चालक पनि रहेका थिए।
उनको दोस्रो कृति समर लभ २०६९ व्यापारीक हिसाबले एक सफल उपन्यास हो। समर लभको सफलतासँगै सुविन भट्टराई युवामाझ लोकप्रिय बनेका थिए र सोही लोकप्रियता र पाठकहरूको विशेष अनुरोधमा उनले त्यस पुस्तकको दोस्रो भाग साया बजारमा ल्याएका थिए। उक्त पुस्तकले समर लभले राखेको सर्वाधिक बिक्री हुन सफलको किर्तिमानी तोडेको थियो। उनको दोस्रो उपन्यास समर लभमा आधारित सोही नामको चलचित्र समेत बनेको छ जसको निर्माता लोकप्रिय चलचित्र निर्माता विकास आचार्य हुन्। उनले वि.सं २०७५ सालमा मनसुन नामक प्रेम कहानीमा आधारित उपन्यास प्रकाशित गरिसकेका छन्।
Wikipedia: सुविन भट्टराई